မုယော ရဲ့ကျန်းမာရေး အာနိသင်......... - Hello Sayarwon
မုယော (malt) လို့ ပြောလိုက်ရင် အရင်ဆုံး ပြေးမြင်တာ ဘာလဲ……. malted milk လား……. မုယော အားဖြည့်အချိုရည်တွေလား…… ဘီယာလား…. liquor လား……..
ဒါတွေကို မုယောကနေ ထုတ်လုပ်တာပါ။ ဒါတွေ အပြင် မုယောကို သုံးထားတဲ့ ကွတ်ကီးတွေတောင် ရှိပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေက ထုတ်လုပ်ပုံတွေ ကွာခြားသွားပေမယ့် မုယောကိုပဲ အသုံးပြုထားတာပါ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဒီလောက် အမျိုးအမည် များစွာ ထုတ်လုပ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ မုယော က ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို ထောက်ကူပေးလဲ ဆိုတာ ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
မုယော (Malt) ဆိုတာ
မုယောဆိုတာ ဆန်၊ ဂျုံတို့လိုမျိုး ကောက်နှံတစ်ခုပါပဲ။ မုယောကို ခူးဆွတ်ပြီးတဲ့အခါ ကောက်နှံတွေကို အရင်ဆုံး ရေစိမ်ရပါတယ်။ အပင်ပေါက်လာစေဖို့ပါ။ ပြီးရင်တော့ လေပူနဲ့ အခြောက်ခံပြီး အပင်မပေါက်အေင်လုပ်ရပါတယ်။
ဒီလုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ကောက်နှံထဲက ပရိုတင်းတွေ ပြိုကွဲပြီး အင်ဇိုင်းတွေ ထွက်လာပါတယ်။ ဒီအင်ဇိုင်းတွေက အမိုင်နိုအက်ဆစ်ကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ မုယောကို တစေးအနေနဲ့ အသုံးပြုကြတာပါ။
မုယောမှာ ဘယ်လို အာဟာရတွေ ပါဝင်နေလဲ
သုတေသန စစ်တမ်းတွေအရ မုယောမှာ အရေးပါတဲ့ အာဟာရဓာတ် များစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဗီတာမင် နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ်၊ အမျှင်ဓာတ်၊ ဗီတာမင် B အုပ်စုတွေ၊ ပရိုတင်းစတဲ့ အာဟာရဓာတ် များစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။
မုယော ကပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး
မုယောက ကျန်းမာရေးကို အခုလို အထောက်အကူပြုပါတယ်။
မုယောရဲက ကျန်းမာရေး အာနိသင်တစ်ခုက အစာခြေစနစ်အတွက် အကျိုးပြုတဲ့ ဘက်တီးရီးယားလေးတွေကို အာဟာရ ထောက်ပံ့ပေးတာကြောင့် အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်က ဝမ်းမချုပ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပြီး အူနံရံတွေကို အာဟာရ စုပ်ယူမှုကောင်းအောင် အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးပါတယ်။
အာဟာရ စုပ်ယူမှု ကောင်းတာက ကိုယ်ခံအား စနစ်ကိုပါ အထိရောက်ဆုံး အားဖြည့်ပေးပါတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရ မုယောက သွေးတွင်းက အကျိုးမပြု ကိုလက်စထရော ပမာဏကို ကျဆင်းစေပြီး နှလုံးကျန်းမာစေဖို့ ထောက်ကူပေးပါတယ်။ မုယောမှာပါတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေက သွေးတွင်းကိုလက်စထရောကို ကျဆင်းစေပြီး ဗိုက် အဆီကျစေသလို ခါးတဝိုက်က အဆီတွေကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်တင့်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ထုထည်ညွှန်းကိန်း (BMI) ရရှိစေဖို့လည်း ထောက်ကူပေးပါတယ်။
မုယောက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပါ ကျန်းမာစေပါတယ်။ မုယော မှာပါတဲ့ hordenine လို့ခေါ်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းက ဦးနှောက်ထဲက စိတ်ခံစားမှု ကောင်းစေတဲ့ ဟော်မုန်းတွေ ထွက်ရှိအောင် လှုံ့ဆော်ပေးပြီး စိတ်ခံစားမှု ကောင်းစေဖို့ အထိရောက်ဆုံး အားဖြည့်ပေးပါတယ်။
မုယောက ဗီတာမင် ၊ သတ္တုဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေမှုက အရိုးတွေကို သန်မာစေဖို့ အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးပါတယ်။ ပရိုတင်း နဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ် ပါဝင်နေမှုက အရိုးတွေ သန်မာအောင် အကောင်းဆုံး ထောက်ကူပေးမှာပါ။
ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် နဲ့ ပရိုတင်း ပါဝင်နေမှုက ခန္ဓာကိုယ်မှာ အင်အားပြည့်ဝစေဖို့ အထိရောက်ဆုံး အားဖြည့်ပေးနေပါတယ်။
နောက်ထပ် အာနိသင် တစ်ရပ်ကတော့ ဗီတာမင် ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတာက အသားအရေကို သွေးနဲ့ အောက်ဆီဂျင် ရောက်ရှိမှု ကောင်းစေပြီး အသားအရေ ပြဿနာ ကင်းလို့ ကျန်းမာစေဖို့ ထောက်ကူပေးပါတယ်။
ဒီလို အကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ မုယောကို ကျန်းမာရေးအတွက် နှစ်သက်သလို ပုံစံနဲ့ တန်ဆေး လွန်ဘေး ချင့်ချိန်ပြီး မှီဝဲလို့ ရပါတယ်။
What Is Malt? (Healthy Sweetener or Another Sugar Trap?) https://draxe.com/nutrition/what-is-malt/ Accessed Date 24 February 2021
10 Amazing Health Benefits Of Malted Milk/Malted Milk Powder https://www.stylecraze.com/articles/health-benefits-of-malted-milkmalted-milk-powder/ Accessed Date 24 February 2021
မုယောစပါးအာဟာရအချိုရည်တွေက ကလေးအတွက် ဘာအန္တရာယ်ရှိနိုင်သလဲ
မုယောစပါးအချိုရည် (malt milk) က ထင်သလောက်ဘေးကင်းရဲ့လား
ဂျုံနဲ့ လုပ်ထားတဲ့အစားအစာတွေစားခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ